Archive du 20190503
Ravalomanana sy ny TIM Haneho ny heriny eny Ambohijatovo
Fanopoam-pivavahana lehibe no hotanterahina etsy amin’ny Kianjan’Ambohijatovo rahampitso 4 mey ho an’ny Antoko Tiako i Madagasikara io. Fotoana io hanolorana amin’ny fomba ofisialy ireo kandida atolotry ny TIMK25 amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao.
Stephanie Delmotte Tsy manana olana amin’ny Filoha aho
Tsy nametra-pialana ary tsy nieritreritra ny hiala tsy ho Tale kabinetra sivilin’ny fiadidian’ny Repoblika, ary mampandeha an-tsakany sy an-davany ny asa iandraiketany Rtoa Stephanie Delmotte.
Paolo Emilio Raholinarivo Mila Diovina ihany koa ny fitsarana
“Aleo tsy hisy mihitsy ny akamakama ary aleo hihitatra ny fanagadrana” hoy ny Administratera sivily, Paolo Emilio Raholinarivo.
Fifidianana solombavambahoaka Efa misy zavatra tsy mandeha sahady
Efa misy zavatra tsy mandeha sahady ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka hotanterahina amin’ny 27 mey ho avy io, hoy Rasamson Naina,
Josè Andrianoelison « Manana trosa miavosa ny Malagasy »
Kandidà nisedra safidim-bahoaka, naneho hevitra tamin`ny famoahana voka-pifidianana voalohany ka nangingina taorian`izay, i Jose Andrianoelison na Josè Kely.
Fangoronan-karena mampiahiahy Mihorohoro ny hohenjehina ny Filoha
Nodiana adala sy toa nezahina natao izay tsy hahatontosa ny fandinihana sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny harena azo tamin’ny fomba maloto na ny “avoirs illicites”
Fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety Mifaningotra tanteraka amin`ny politika
Homarihana anio 3 mey ny andro maneran-tany ho an’ny falalahan’ny asa fanaovan-gazety.
Feno 2 taona ny TOP Radio 102.8Fm Sahy hiteny ho an`i Gasikara hatrany
Feno 2 taona katroka omaly alakamisy 2 mey ny onjam-peo tsy miankina Top Radio eo amin’ny mari-drefy 102.8Fm, izay manana ny endriny hafa mihitsy ankehitriny na eo amin’ny fitantanana na ny fandaharana vokarina, izay miezaka mizara ny soa sy ny tsara ho fanasoavana ny fiarahamonina sy ny firenena izay miseho amin’ny endrika samihafa.
Karama farany ambany miakatra Tsy tokony harahina fisondrotan’ny vidim-piainana
Nihatra ny fampiakarana ny karama farany ambany ho 200 000 Ariary raha 155 523Ar talohan’izao fanapahan-kevitra izao.
Kamiao nivadika tany Manakara Tafiakatra 6 ireo miaramila maty
Tafakatra enina hatramin’ny omaly tokony ho tamin’ny 02 ora maraina ny isan’ireo miaramila namoy ny ainy vokatry ny fivadihan’ilay fiaraben’ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC
« Telma Coupe de Madagascar » 1/4-dalana Hanao valin’ady amin’ny Fosa Juniors ny Jet Mada
Hangotraka ireo lalao 1/4-dalan’ny fifaninanana “Telma Coupe de Madagascar 2019” hotontosaina eto Antananarivo sy any Mahajanga amin’ny alahady 05 mey ho avy izao.
Champion’s League any Eoropa Tsara toerana i Barcelone sy Ajax
Taorian’ny fandresena azon’izy ireo tamin’ny ankatoky ny famaranana mandroso dia efa any amin’ny lalao famaranana amin’ity fifaninanana ity,
Hazakazaka ho an’ny Fanantenana Nanodidina ny 3000 ireo nandray anjara
Tontosa teto Antananarivo omaly alarobia 01 mey 2019 ny hazakazaka ho an’ny Fanantenana andiany voalohany nokarakarain’ny Fiangonana Advantista Malagasy niaraka tamin’ny
Zatra ny làlan-dririnina!
Ezahina ahena ny vesatry ny fanjakana. Esorina ny mpiasa tsy raikitra any amin’ny minisitera samihafa (ECD) mba hampihenana ny vesatra ka tsy maintsy mifehy kibo.
Fanjakana Malagasy Tsy afa-miala amin`ny mpamatsy vola mahazatra
Masoivoho 8 ao amin`ny Vondrona Eoropeanina no nihaona tamin`ny Filoham-pirenena teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha amin’ny dinika ara-politika andiany fahafito teo amin`ny roa tonta.
TRAFIKANA FITAOVAM-PIADIANA Basy miisa 3 sarona tao Ambanja
Basy 3 no tratran’ny “Barrage routier” an’ny Polisin’ny kaomisaria Ambanja tamin’ny lalam-pirenena faha-6 ny marainan’ny zoma heriny.
Tovolahy efa in’efatra nigadra Tratra nangalatra solosaina teny Antohomadinika
Efa jiolahy raindahiny niditra am-ponja in’efatra ny iray tamin’ireo saron’ny polisy omaly sy afak’omaly.
ANJAKAN’NY GADRA LAVA NY TANANA Jiolahy roa mpamerin-keloka sarona tena Analamahitsy
Saika ireo mpamerin-keloka avokoa no tra-tehaky ny mpitandro filaminana tato ho ato. Roalahy samy efa nigadra teny Antanimora indray no azon’ny polisin’ny
ONG AFFAMI Boriborintany faha-6 Nanofana maimaimpoana ny mpiompy
Saika misehatra amin’ny fambolena sy fiompiana avokoa ny mponina eny amin’ny boriborintany faha-6. Mbola olana anefa ary tsy mahatsara sy tsy mampivoatra ny vokatra ny fampiasana ny fomba nentim-paharazana.
Mpidoroka zava-mahadomelina 12 taona no zandriny indrindra
Karazan-javatra iray zary fialambolin’ny ankizy sy ny tanora eto amintsika mihitsy ankehitriny ny fandraisana sy fidorohana zava-mahadomelina.